तीन महिनाअघि पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले एउटा ट्विट गर्नुभयो । त्यसको सार थियो— नेपालले विश्व वरीयतामा ‘टप हन्ड्रेड’ मा पर्ने कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया: ‘भुत्ते शिक्षा प्रणाली’
भदौ २ को कोसेलीमा प्रकाशित ‘आई हेट ‘स्कुल’ लेख पढें । हाम्रो समाजको आवाजलाई लेखमा समेटिएको पाएँ । यसमा हजारौं र लाखौं विद्यार्थीको आवाज लुकेको छ ।
ज्वज्वलपा सिक्न ठिमी
नेपालका अनेकन भेगबाट बसाइ सरेर भारतका विभिन्न प्रदेश पुगेका नेवारहरूसँग बचेखुचेको केही परम्परा र संस्कृति त छ, तर त्यो पुरानै स्वरूपमा छैन । कतिसम्म भने काठमाडौंमा बस्ने नेवार जातिले मनाउने क्वाँटी पूर्णिमा भारतको अरुणाञ्चल पुग्दा अपभ्रंश भएर कोक्ती पूर्णिमा बनिसकेको छ ।
वसन्तको नौ भाका
नेपालभित्रकै मातृभाषामा अनुवाद साहित्यको काम फाट्टफुट्ट भइरहेकै छ । कवि एवं गीतकार वसन्त चौधरीले भने एकसाथ नौवटा भाषामा आफ्नो कृति ल्याएर नौलो काम गरेका छन् । उनको कविता कृति ‘वसन्त’ को हालै नेपाली, हिन्दी, भोजपुरी, मैथिली, अंग्रेजी, नेपाल, तामाङ, बंगाली र मारवाडी भाषामा अनुवाद गरी सार्वजनिक गरिएको छ ।
सांकेतिक भाषाको महत्त्व र महत्ता झल्काउने गरी हालै ‘नेपाली सांकेतिक भाषा शब्दकोश’ प्रकाशनमा आएको छ । राष्ट्रिय बहिरा महासंघले प्रकाशित गरेको शब्दकोशमा ४ हजार ७ सय शब्द समेटिएका छन् । विकास घिमिरे र किरण आचार्यको सम्पादन, विकास घिमिरे र शीलु शर्माको भाषालेखन, प्रतिज्ञ शाक्यले हरेक शब्दको संकेत झल्किने चित्र कोरेका छन् भने हस्तआधार वर्गीकरण किरण आचार्य र सन्तोष पौडेलले गरेका छन् ।
‘दक्षिणायन’ मा इल्या
स्रष्टा इल्या भट्टराईको ‘दक्षिणायन’ नियात्रासङ्ग्रह आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरातलमा लेखिएको महत्त्वपूर्ण कृति हो । डिकुरा पब्लिकेसनले हालै प्रकाशनमा ल्याएको ‘दक्षिणायन’ लाई भावनात्मक सौन्दर्यको द्योतकका रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
दाइले राल्फाको उत्पत्ति तथा आफ्नो अनुभूतिबारे प्रकाश पारिदिए जिज्ञासुहरूको जिज्ञासा मेटिने थियो ।’
मुग्लिन– जनसाधारणको जिब्रोमा झुन्डिएको एक नाम । पूर्व होस् वा पश्चिम । जता गए पनि पनि ‘ट्रान्जिट’ बन्छ, चितवनको मुग्लिन ।
हात्ती विभिन्न समूहमा हिंड्छन् । भालेपोथी सँगै पनि हिंड्छन् । त्यस्तो बेलामा भाले गार्डको रूपमा पछिपछि हुन्छ भने पोथी अघिअघि । पोथी आकारमा ठूलो पनि हुन्छ । बच्चाहरू भाले–पोथीकै बीचमा लुकेर हिंडेका हुन्छन् । लोनर (सिङ्गल) हिंड्ने हात्ती पनि हुन्छन् । पर्सामा ‘लोनर’ हात्ती पनि छन् ।
एक दिन मिल्ने साथीले भन्यो–हिंड डीभी भरौंअर्को दिन व्यस्त सडकमा रोकेर अर्को साथीले थप्यो–यो देशमा बसेर के गर्नु ?
मैले तिमीसँग माया बााडें,प्रेम बााडें,
सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया: सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दु:ख भाग्जन: गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित हुने यो संस्कृत श्लोक नपढ्ने नेपालीहरू सायदै होलान् । अहिलेको सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ नाराको भावसँग मेल खाने यो श्लोकलाई आजभन्दा १ सय ७ वर्ष (१९५८) पहिला तत्कालीन गोरखापत्रका सञ्चालक तथा सम्पादक जयपृथ्वीबहादुर सिंहले प्रचलनमा ल्याएका थिए ।
छाउघर व्यथा: सल्लिपिर ओछ्याएर सुतें...
महिनावारी भयो भने फेरि त्यही छाउघरमा शरण लिन जानुपर्छ भन्ने डरले सताउँछ । त्यतिखेर मान्छेभन्दा एक स्थान तल झरेजस्तै लाग्छ र घर जान मन लाग्दैन । यो पीडाबाट मुक्त गर्न अरु धेरैलाई नसके पनि मेरै घरबाट सुरु गर्नेछु, मेरी छोरीलाई छाउ महसुस हुन दिने छैन ।
कवि एक्लै घुमिरहन्छकविताहरुकोठामा ऐना, भान्सामा छुरा, ओछयानमा पत्नीजस्तीजहींतहीं
भाषा म्वा:सा जाति म्वाइ
महाकवि सिद्धिदासको प्रख्यात भनाइ छ, ‘भाषा म्वा:सा जाति म्वाइ’ अर्थात् भाषा बाँचे मात्र जाति पनि बाँच्छ । पद्मरत्नका बुझाइमा, नेवारका लागि अझ बढी लागू हुन्छ । नेवारबीच पनि धेरै विविधता छ । उनीहरूबीच धर्म र संस्कृतिमै फरक छ । खालि एउटै समानता भनेको भाषा हो । अब यो भाषा नै रहेन भने कसरी नेवार पनि रहन्छ ?